SMF forum အခက်ခဲများ(ကူညီပေးကြပါအုံးနော်) - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Web Development Section - 1 » Portal/Forum/Blog/CMS » ဆွေးနွေးချက်များ
SMF forum အခက်ခဲများ(ကူညီပေးကြပါအုံးနော်)
ပို့စ် 28 ခုအတွက် 57 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျနော် smf forum မှာ drop down child board လေးရယ် thankOmatic လေးရယ် Chatbox လေးရယ် member color (rank အလိုက် မန်ဘာ name တွေမှာ ကာလာလေးဖြစ်ချင်လို့ပါ ) နောက်ပြီး ကျနော်တို့ RanK တွေရဲ့အောက်မှာ .. (ဥပမာ Adminstrator ရဲ့အောက်မှာ Newbie ဆိုတာကြီးကို ဖျောက်ချင်လို့ပါ.. ) အဲဒါတွေလုပ်ချင်လို့ဗျာ. အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေလို့ အစ်ကိုတို့ အစ်မတို့ ကျနော့်ကိုရှင်းပြပေးပါနော်.. ကျနော် smf version က 2.0.9 ပါ thankOmatic123 ကိုတင်ပါတယ်.. configuration မှာမပေါ်ဘူးဗျ.. နောက်ပြီး ဘယ်မှာ ဘယ်လိုပြင်ရမယ်မသိဘူးဖြစ်နေတယ် အဲဒါလေးကိုရှင်းပြပေးပါနော် ကျနော်အရမ်းစိတ်ဝင်စားနေပြီး မေးမြန်းမယ့်လူလည်းမရှိလို့ပါ.. ကူညီကြပါအုံးနော်.. ကျနော် HTML JAVA Basic ရှိပါတယ်. ကျနော် Forum ရဲ့ အတိမ်အနက်ကို သဘောမပေါက်သေးလို့ပါ.. ရှင်းပြပေးပါနော်.. Please
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ကိုပျစ်ချွဲ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Aung Aung, pannuko, zo
Find More Posts by ကိုပျစ်ချွဲ
ပြန်စာ - SMF forum အခက်ခဲများ(ကူညီပေးကြပါအုံးနေƞ
ကျနော့် ပို့စ်အတွက် ပြန်စာပေးဖို့ အဆင်မပြေခဲ့ရင်လည်း .. ကျနော့်ကို ဆက်သွယ်ပေးကြပါ.. SMF forum ကိုင်တတ်တဲ့ Developer တစ်ယောက်ယောက် ကျနော်လိုအပ်နေလို့ပါ.. ကျနော် အခကြေးငွေ ဖြင့် သင်ယူပါမည်။ ကျနော့်အတွက်
အန်မတန်မှ အရေးကြီးပြီး သိလိုစိက် များနေလို့ပါ။
Last edited by ကိုပျစ်ချွဲ; 23-10-2014 at 11:26 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကိုပျစ်ချွဲ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
23-10-2014, 03:58 PM
ဒီဖိုရမ်မှာတော့ အကိုမေးသလို မေးတာတွေအတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုပါဘူး။ သိတဲ့သူတွေရှိရင် အကုန်လုံး အခမဲ့ ဖြေပေးသွားကြမှာပဲ။
လောလောဆယ် ဖြစ်နိုင်တာက smf ဖိုရမ်သုံးတဲ့သူတွေ၊ အကိုမေးတဲ့အခက်အခဲ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိတဲ့သူတွေ အကို့ပို့စ်ကို မတွေ့လို့ ဖြစ်မှာပါ။
ကျွန်တော်လည်း smf သုံးနေကျလည်း မဟုတ်တော့ မကျွမ်းလို့။ အရင် နည်းနည်းတော့ စမ်းဖူးတယ်။ ၄-၅ နှစ်လောက် ရှိပြီထင်တာပဲ။ သေချာတောင် မမှတ်မိတော့ဘူး။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Aung Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
23-10-2014, 06:39 PM
Originally Posted by Aung Aung
ကျနော်လည်း ၄ ၅ နှစ်လောက်ရှိပြီ လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျနော်လုပ်ခဲ့တာက ဖိုရမ် package တင်တယ် rank ကြယ်လေးတွေ logo တွေ css တွေဒီလောက်ပဲ ပြင်ခဲ့တင်ခဲ့တာပါ.. mod တွေက version နဲ့မကိုက်ရင် အထုတ်တဲ့ coding ၀င်ပြင်ရတော့ အဲဒီတုန်းက လုပ်တတ်သူတွေကိုပဲ အကူတောင်းလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာ မသိခဲ့ဘူး.. အခု ကျနော် ပြန်လုပ်တော့ အဲဒါတွေပဲ မရတာဆိုတော့ coding ပြင်တဲ့သဘောတရားတွေ ကိုနားလည်ပြီး ပြင်တဲ့နေရာကို မရှာတတ်ဖြစ်နေတာပါ.. ဥပမာ ThankOMatic ကိုတင်မယ်ဆိုရင် ဖိုရမ် version နဲ့မကိုက်ရင် coding တွေ Finding replace လုပ်ရတာတွေရှိပါတယ်.. SMF ဖိုရမ်မှာလည်း ၀င်ကြည့်တဲ့အခါ တစ်ချို့ဟာလေးတွေ Find လုပ်လို့မရတော့ replace လုပ်ဖို့လည်း အခက်ခဲတွေရှိ.. ကိုယ်ထင်ရာ ကိုလုပ်ပြန်တော့လည်း ဖိုရမ်က ကျ. အဲလိုတွေကြုံ တွေ့နေရာတော့ နားလည်သိတတ်တဲ့ ညီအစ်ကိုများရှိရင် ဆရာတင်ပါတယ်.. ကူညီကြပါအုံးလို့ .. Please
28-10-2014, 10:25 AM
ကျနော် အချိန်တိုင်း နေ့တိုင်း ပြန်စာအတွက် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှူ ပေမယ့် အခြေနေမထူးသေးဘူး... အစ်ကို Admin တို့ရေ ကူညီပါအုံး
28-10-2014, 06:00 PM
ပို့စ် 16 ခုအတွက် 49 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ diaper အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
pannuko, tu tu, zo
Originally Posted by ကိုပျစ်ချွဲ
smf ကို စမ်းရုံပဲ စမ်းကြည့်ဖူးတာမို့ သေချာတော့ မသိပါဘူး။
မေးထားတာတွေ့ပေမယ့် စမ်းကြည့်ပေးဖို့ မအားတာနဲ့ မဖြေဖြစ်ဘူး။
ခု စမ်းကြည့်လို့ ရသလောက် ဖြေပေးပါမယ်။
drop down child board
အဲ့ဒီ Mod ကို install ကြည့်ပါ။ ထုံးစံအတိုင်း Admin -> Package Manager -> Download Package -> UploadaPackage မှာ upload ပြီး Install လိုက်ရုံပါပဲ။
Thank-O-Matic 3.0 နဲ့ စမ်းကြည့်တာလည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ SMF latest version နဲ့ compatitable မဖြစ်လို့ ထင်တာပဲ။
member name တွေကို color ပြောင်းချင်ရင် Admin -> Features & Options -> Members -> Membergroups -> Edit Membergroups ကို သွားပါ။
အဲ့ဒီမှာ ကိုယ်ပြင်ချင်တဲ့ membergroup ဘေးက modify ကိုနှိပ်ပါ။
Color in online list မှာ ပြောင်းချင်တဲ့ color code ထည့်ပါ။ color code တွေ ဒီမှာ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
RanK တွေရဲ့အောက်မှာ .. (ဥပမာ Adminstrator ရဲ့အောက်မှာ Newbie ဆိုတာကြီးကို ဖျောက်ချင်လို့ပါ.. )
အထက်မှာ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ Admin -> Features & Options -> Members -> Membergroups -> Edit Membergroups ကို သွားရင် Post count based groups ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီမှာ Modify ကိုနှိပ်ပြီး ကြိုက်တဲ့အမည် ပြောင်းလို့ ရပါတယ်။ Required posts အရေအတွက်လည်း ကြိုက်သလို ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
Admin, Mod တွေလို non-post based Groups members တွေကို title ဖျောက်ချင်တာဆိုရင်တော့ အထက်ကပို့စ်မှာ diaper ဖြေပေးထားပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုပဲ အခြား members တွေကို title ဖျောက်ချင်ရင် non-post based Groups မှာ new group add ပြီး title ဖျောက်ချင်တဲ့ members တွေကို အဲ့ဒီ group assign လုပ်ပေးရပါမယ်။
Last edited by tu tu; 02-11-2014 at 12:09 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုပျစ်ချွဲ, မောင်ပေါ်ဦး, Aung Aung, diaper, zo
ကိုယ်ပိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်း(OR) phpBB အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း phoelapyaee ဆွေးနွေးချက်များ 50 09-11-2012 09:05 PM
Making Wordpress Blog And Building Forum With PhpBB ကိုရင်ပြည့်စုံ E-books များ227-08-2010 12:29 AM